Muva nje, imibukiso ye-TV yaseTurkey iyakwazi ukuthandwa ngethelevishini yasekhaya. Ukubukeka kwabo kuye kwababukeli abajabulayo, futhi okuthakazelisayo futhi obambe umbukeli ngokusobala lezi zihloko ziheha kakhulu. Ngakho-ke, akumangalisi ukuthi uchungechunge oluthi "Syla. Ukubuyela ekhaya ", abalingisi nezindima ezenziwa kuyo, bajabule abalandeli be-melodramas eningi-chungechunge. Ngaphezu kwalokho, ababukeli abaningi bajabule ngokuhlangana nomlingisi oyinhloko, ngoba udlalwa yindoda enhle futhi engumdlali womdlali wakhe, uMehmet Akif Alakurth.
Abadlali befilimu "uSyla. Ukuqashelwa "kwakhunjulwa kubantu abaningi ngokuyinhloko ngenxa ye-melodrama evulekile phambi kwezilaleli. Isakhiwo salolu chungechunge sasisekelwe endabeni mayelana nesiphetho esimangalisayo sobuhle obusha, intombazane yaseTurkey okuthiwa nguSyla, eyabamba iqhaza kulo mdlali othakazelisayo uJansu Dere. Ngokwalesi sakhiwo, kusukela esemncane, abazali banikela umbhangqwana ocebile wase-Istanbul ngemfundo, ngoba bebengakwazi ukunikeza le ntombazane ithuba elizayo. Kuze kube yilapho esekhulile, impilo yakhe yayinjengenganekwane, eyayinayo yonke into engcono kakhulu futhi efanelekile. Kodwa ngesikhathi esisodwa konke kwashintsha kakhulu. Ubaba wakhe weza e-Istanbul futhi wamthatha ngeso lengqondo lokuthi unina wayegula futhi edingeka ngokuphuthumayo ukuba abuyele ekhaya. Wenza konke ukuze ajwayele ukuphila okuhluke ngokuphelele, kodwa akasoli ukuthi imithetho nemithetho ehluke ngokuphelele esebenza lapha. Futhi akasazi ukuthi, ngokwemithetho yamazwe angaphandle, izihlobo zakhe zizokwenza isinqumo sakhe. Futhi u-Syla akazi ukuthi yiziphi izivivinyo abazimisele zona. Yena ngaphandle kwemvume utshele indoda engakaze ibone. Kwakungumlingiswa owenziwe yizintandokazi zezingcingo zokuxhumana - i-Mehmet Alakurta.
Indaba yonke isekelwe othandweni olubuhlungu phakathi kwesibhangqwana esingavamile. Intombazane ehlushwa emphefumulweni futhi ibuhlungu enhliziyweni yakhe, futhi indoda ekhethiweyo inqunywe yizinto zonke, futhi phambi kwakhe yizinkolelo ezindala zomndeni wakhe nothando oluqotho oluvela enhliziyweni, kodwa isinqumo esinzima sisekelwe kahle emahlombe akhe. Ukudubula uchungechunge oluthi "Syla. Ukubuyela ekhaya "abadlali baqedile emuva ngo-2006, futhi ababukeli babe nethuba lokubona isiphetho esibuhlungu sabalingiswa phakathi nochungechunge lwamashumi ayisikhombisa nesishiyagalolunye. Ngomlingiswa oyinhloko wochungechunge, noma kunalokho nomdlali we-actress, othole le ndima, ababukeli basekhaya bayazi isikhathi eside. Umlingisi uJansu Dere, odlala indima kaSyla, usujwayele wonke umuntu ochungechungeni oluthi "Ubudala obuhle kakhulu."
Isizinda salo mdlali, owadlala i-protagonist, wazalwa ngo-July 23, 1979. Ababukeli abaningi banesithakazelo ekukhuleni kwakhe - ngakho-ke, unamamitha angu-190. Ubaba ka-actor wayengumuntu wezempi. Khulisa umfana e-Istanbul. Ngemuva kokuqeda isikole samabanga aphansi, umlingisi wesikhathi esizayo unquma ukuzizama ebhizinisini lokulinganisa. Ngenxa yosizo lukaMama, kuvela ngo-1989 hhayi kuphela ukufika kule podium, kodwa futhi ukuthola ukunakekelwa kochwepheshe. Ukusebenza ejensi okuthiwa "u-Erberk", wakwazi ukuthola iziqu ezimbili eziphezulu kakhulu, okuyi-"Prince of Turkey" nethi "Ikusasa elithembisayo".
Ngokuvamile, wadlala ngokuphelele kulolu chungechunge oluthi "Syla. Ababuyela ekhaya »abadlali. I-Biography i-Alakurta ishintshile ngokuphawulekayo ngemuva kokuchungechunge kwamaskrini we-TV. Ngemva kokukhonza empini, uMehmet wathola imincintiswano yamakhamuzi amaningi ngo-2001. Ngemva kwalokho, iminyango yama-model eTurkey naseYurophu yavulwa phambi kwakhe. Umsebenzi wakhe wethelevishini waqala ngo-2002, lapho eqala ukuqoshwa ngochungechunge lweTurkey TV. Kodwa ukuthandwa kwangempela kwafika eminyakeni emine kuphela kamuva, lapho enza enye yezindima eziyinhloko kulolu chungechunge oluthi "Syla. Buyela ekhaya, "abadlali babekhethwe ngokucophelela kakhulu.
Ubudlelwano phakathi kwabadlali abadlala ama-protagonists
Ngokombiko, owakuthandwayo uMehmet Akif Alakurth kanye noJansu Dere othakazelisayo benza imisebenzi yombhangqwana onothando ongalawuleki. Kodwa empilweni ubuhlobo babo buhluke ngokuphelele. Ngaphandle kwe-studio, abakhulumi nhlobo, futhi ngesikhathi sokuqopha, abaningi babona izingxabano zabo njalo. Naphezu kwalokhu, ngemuva kokukhululwa kochungechunge oluthi "Syla. Buyela ekhaya »izithombe abadlali abenzayo, bambaza futhi benobuso obujabulisayo. Isizathu esiyinhloko sokungqubuzana phakathi kwabadlali bechungechunge kungukungapheli kweJansu. Ngesikhathi sokuqopha, wayenothando olunomdlandla nomlingisi omncane odumile waseTurkey ogama lakhe linguJem Yilmaz. Ngakho-ke, akazange athathe umsebenzi wakhe ngokungathí sina, okwakungelona neze okwanelisayo kumlingani wakhe kusayithi futhi nsuku zonke kunciphisa isihawu phakathi kwabadlali.
I-biography yomdlali odlala indima enkulu
UJensu Dere wazalwa ngo-Okthoba 14, 1980 emzini waseTurkey wase-Ankara. Ngesikhathi esemncane wathathwa waya e-Izmir, lapho echitha iminyaka yakhe yesikole. Njengengane, umlingisi wekusasa wayekuthanda kakhulu ukufunda nokuhlonipha umlando. Esinye sezifiso zakhe zobuntwana ukuba ibhola, kodwa lokhu kwakungenakwenzeka ukuba kwenzeke. Kodwa ukhetho lwezifundo olwengeziwe lwaqala ukungalindelekile: lwalukhetha ubuciko ekuvukeni kwemvelo. Intombazane yangena e-Faculty e-University of Istanbul. Kusukela esemncane, uJensu wabonisa ukuqina komlingiswa nokuzimela, ekhetha imigwaqo yakhe ebalulekile, futhi esemncane waqala ukuhlala ngokwehlukana nomndeni wakhe. Naphezu kwalokhu, ngesikhathi sokuqoshwa kwe "Syla. Ebuyela ekhaya, "abadlali abazange basabele kahle kumlingisi wakhe, bekholelwa ukuthi wayengeyona into embi ngomsebenzi.
Ukubukeka okungavamile nokukhangayo kuye kwazizwa, futhi wonke umuntu waphawula lokhu. Ukufunda umvubukuli, le ntombazane yathola iziqu emincintiswaneni yobuhle bayo. Kamuva, ngonyaka ka-2000, wabamba iqhaza emncintiswaneni womhlaba wonke futhi wathola umklomelo kuwo. Futhi emva kweminyaka emibili intombazane yaqala ukuqhuba ibhizinisi ngokulinganayo. Futhi kwaba yimpumelelo kakhulu kuye, ngoba kwakungamangaleli umphakathi kuphela, kodwa futhi wabathwebuli bezithombe abadumile nabadwebi befashini. Eminyakeni emithathu emva kokuqala, uJensu waziwa ngeTV ngemuva kokuthola indima yakhe yokuqala kulolu chungechunge. Ukuzijabulisa kwamlethela uchungechunge lwe-TV "uSyla. Buyela ekhaya. " Abadlali bazama, benza izindima zabo, kunokuba befanelwe uthando lwezilaleli eziningi. Kubekwe inkanyezi ezinkampanini eziningi ze-TV nemiklamo yefilimu, kodwa ethandwa kakhulu yiyona indima yakhe kulolu chungechunge oluthi "Ubudala obukhulu kakhulu." Umncintiswano kaROSSOLANA useyintandokazi yangempela yababukeli be-TV basekhaya nabangaphandle. Ngenkathi eqoshwa kuthelevishini, akakhohlwa umsebenzi we-model. Ngonyaka ka-2012 no-2013, wasebenza ngegama elidumile lama-cosmetics Loreal, isikhathi eside wayemelela inkampani yezimonyo ze-AVON futhi waze wabamba iqhaza ekukhuthazeni inkampani ethandwa kakhulu ye-ayisikhilimu MAGNUM.
Ukuphila komuntu siqu kwe-Dere
Umdlali wezemidlalo ufihla kakhulu lokho okusenhliziyweni yakhe nomphefumulo wakhe. Kodwa kulabo abalandeli kunendaba eyodwa ebalulekile - akazange athole umuntu ozohamba naye ngaphansi kwe-awning. Ngokwe-actress ngokwakhe, uma ethola ingane yakhe, uzozinikela ngokuphelele emndenini. Ubuhlobo noJem bebudlova, badlula ngesikhathi kuqoshwa "uSyla. Buyela ekhaya. " Abalingisi base bebheka ukunakwa okuningi. Le noveli iphelile njengenhlekelele njengoba kwenza kulolu chungechunge. Eminyakeni emine kamuva, lo mdlali weqhawe waqeda ukuhlanganyela, njengoba kwenzeka ukuthi ufunde ngokukhashelwa komuntu othandekayo nomunye wabangane bakhe abakhulu. Kusukela ngaleso sikhathi, akukho buhlobo obujulile nomdlali we-actress.
Ukuzilibazisa komlingisi oyinhloko
Isikhathi samahhala kusukela ekuqopheni umlingisi uchitha uhambo. Enye yezindlela zokuzilibazisa eziyinhloko ukudweba izithombe, futhi izithombe ziyizobuchwepheshe. Njengomdlali we-actress, unomtapo omkhulu wezincwadi ezihlukahlukene. Akakayekanga ukufundwa futhi usenxenxa inani elikhulu lezincwadi. Kulesi simo, uyaphenduka ngokucophelela emakhulwini aseRashiya naseDostoevsky.
Biography of Selena Gomez. Indlela yokuba abadumile